Fitiliana ny Covid-19 : Vehivavy iray sisa no karohina ao Toliara Polisy narahina ambulance no naka ramatoa iray
Nambinina, 8 taona Nisy nibata teny 67 Ha...mitantara ny Renibeny
Nisy nibata tampoka teny amin’ny Jirama 67 Ha, ny zoma lasa teo i Razanadrakoto Nambinintsoa Julie Berthin Alpha, na i Nambinina. 8 taona izy
Andro fanadiovana manerantany Nandray anjara i Madagasikara
Fikambanana maromaro eto Madagasikara no nandray anjara tamin'ny andro fanadiovana maneran-tany na ny World Clean Up day ny asabotsy 19 septambra teo.
Andro mafana sy sakafo “Mety hanaparitaka aretin-kibo ny lalitra” hoy ny dokotera Manitra Rakotoarivony
Ankoatra ny covid-19, dia tokony hitandrina amin’ny fahadiovan’ny sakafo ihany koa ireo mpivarotra izany, hoy ny dokotera Manitra Rakotoarivony,
BEPC 405.000 ireo hiatrika azy manerana ny Nosy
Miisa 405.000 eo ho eo ireo mpiadina hiatrika ny fanadinam-panjakana BEPC manomboka anio Alatsinainy 21 Septambra manerana ny Nosy.
Faritra Menabe Nahazo sekoly vaovao
Raha tsy maintsy mandeha an-tongotra 45 minitra ireo mpianatra any Mokotra, Faritra Menabe rehefa hamonjy toeram-pianarana dia tsy hisy intsony izany ankehitriny.
Fikambanan'ireo jamba Notsidihin'ny masoivoho Soisa
Nandritra ny fandalovany tany Antsirabe, nandalo namangy ny Federasion'ny fikambanan'ireo jamba eto Madagasikara na ny
Ivon-toerana ho an'ny fikambanam-behivavy Notokanana
Tonga nitokana ny ivon-toerana ho an'ny fikambanam-behivavy ao amin'ny distrika Ambatofinandrahana sy nanokatra ny tetik'asa Asa Avotra Mirindratao amin'ny distrika Manandriana Faritra Amoron'i Mania,
monina ao Betania Tanambao ity omaly folakandro. Iray amin'ireo vehivavy roa nandeha tamin'ireo fiaramanidina niditra teto mialohan'ny nikatonan'ny seranam-piaramanidina ka karohina any Toliara moa ity ramatoa ity.
Tsy nety namoha trano izy, mialohan’ny fotoana nakana azy io, araka ny fantatra. Ny mpanampiny sy ilay mpiambina ny tanànany anefa nilaza fa ao an-tranony ihany izy. Voatery naka taratasy fahazoan-dalana tany amin’ny fokontany ireo manam-pahefana mba ahafahana mamoha an-keriny ny vavahady. Nentina niaraka tamin'ity ramatoa ity ihany koa ny mpiambina ny tranony sy ny vady aman-janany. Ilay vehivavy teratany vahiny iray izany sisa karohina any an-toerana. Rinahsoa